Fibromyalgia နှင့် Gluten: Gluten ပါဝင်သောအစားအစာသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသလား။
Fibromyalgia နှင့် Gluten: Gluten ပါ ၀ င်သည့်အစားအစာသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုမိုရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါသလား။
18 / 02 / 2020 /0 မှတ်ချက်/i Fibromyalgia/av ရေတံခွန်
Fibromyalgia နှင့် Gluten
fibromyalgia ရှိသူများစွာသည် gluten ကိုတုံ့ပြန်ကြောင်းသတိပြုမိကြသည်။ အခြားအရာများအနက်လူအများစုက gluten သည်နာကျင်မှုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ပါ။
သငျသညျ gluten- အခမဲ့မုန့်နှင့်ပေါင်မုန့်လွန်းတယ်ဆိုရင်သင်ပိုမိုဆိုးရွားခံစားရဖို့တုံ့ပြန်ဖူးပါသလား ထိုအခါသင်သည်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။
တကယ်တော့အများအပြားသုတေသနလေ့လာမှုများ (1) အဖြစ်ဝေး gluten sensitivity ကိုနိဂုံးချုပ်အဖြစ် fibromyalgia တစ်ပံ့ပိုးအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ သင် fibromyalgia ရှိပါက gluten ကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသူများစွာလည်းရှိသည်။ ဤဆောင်းပါး၌ fibromyalgia ရှိသူများသည် gluten ကြောင့်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုပိုမိုလေ့လာရမည် - ၎င်းသည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် အချက်အလက်များစွာသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်.
Gluten သည် Fibromyalgia ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
Gluten သည်အဓိကအားဖြင့်ဂျုံ၊ မုယောနှင့်ကောက်တွင်တွေ့ရသောပရိုတင်းဖြစ်သည်။ Gluten သည်ဆာလောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောဟော်မုန်းများကိုသက်ဝင်စေသောဂုဏ်သတ္တိရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်ပိုစားခြင်းနှင့်လျင်မြန်သောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များ (သကြားနှင့်အဆီများစွာပါ ၀ င်သော) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
အချိုမှုန့်ကိုစားသုံးသည့်သူသည် gluten ကိုစားသုံးပါက ၄ င်းတို့အနေဖြင့်အလွန်အကံျွတုံ့ပြန်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဤနေရာသည်အာဟာရများကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူသောနေရာဖြစ်သည်၊ သို့မှသာဤisရိယာနှင့်ထိတွေ့လျှင်အာဟာရဓာတ်များကိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနည်းသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်လျော့နည်းခြင်း၊ အစာအိမ်ရောင်ခြင်းနှင့်အူသိမ်အူမများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
"အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်ခြင်း" အုပ်စုတွင်ပါဝင်သူ ၁၈၅၀၀ ကျော်မှများစွာသောသူတို့သည်သဘာဝဖြည့်စွက်ဆေးများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသတင်းပို့ကြသည်။ အတူထောက်ပံ့ငွေကြိုးစားပါ probiotics (ကောင်းသောအူဘက်တီးရီးယား) သို့မဟုတ် Lectinect အစာအိမ်။ များစွာသောသူများအတွက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ စွမ်းအင်နှင့်စိတ်ခံစားချက်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်အူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေးသည်သင်မဟုတ်သောခံစားချက်အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းသိရသည်။
- Oslo ရှိ Vondtklinikkene ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ကြားရေးဌာနများ (Lambertseter) နှင့် Viken (Eidsvoll အသံ og Råholt) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးခန်းများသည် နာတာရှည်နာကျင်မှု၏ အကဲဖြတ်မှု၊ ကုသမှုနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လေ့ကျင့်မှုတွင် ထူးခြားစွာ မြင့်မားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အချင်း ရှိပါသည်။ လင့်များကိုနှိပ်ပါ သို့မဟုတ် ဒီမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဌာနများအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်။
သုတေသီများစွာသည် "အူတွင်းယိုစိမ့်ခြင်း" ကိုရည်ညွှန်းသည် (2) အူသိမ်အတွင်း ရောင်ရမ်းမှု တုံ့ပြန်မှုများသည် အတွင်းနံရံကို ထိခိုက်စေနိုင်ပုံကို ဖော်ပြသည့်နေရာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောအစားအစာအမှုန်များသည်ပျက်စီးသွားသောနံရံများကိုဖောက်ထွင်းစေနိုင်သဖြင့် autoimmune တုန့်ပြန်မှုများကိုပိုမိုဖြစ်စေသည်ဟုသူတို့ကယုံကြည်ကြသည်။ Autoimmune တုံ့ပြန်မှုဆိုသည်မှာခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဆဲလ်အချို့ကိုတိုက်ခိုက်သည်။ ဘယ်, သဘာဝ, အထူးသဖြင့်ကံကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိရောင်ရမ်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး fibromyalgia နာကျင်မှုနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
အစာရှောင်ခြင်း (အက်စစ်ဖလို၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဝမ်းလျှောခြင်းအပါအ ၀ င်)
သိမှုဆိုင်ရာရောဂါများ (ပါဝင်သည်) fibrous အခိုးအငွေ့)
သင်ဤနှင့်ဆက်စပ်သောအနီရောင်ချည်ကြည့်ပါသလော ခန္ဓာကိုယ်သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချရန်စွမ်းအင်ပမာဏများစွာအသုံးပြုပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်လူများစွာတွင်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်နာကျင်မှုများကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
သင်၏အစားအစာကိုပြောင်းလဲသောအခါတဖြည်းဖြည်းချဉ်းကပ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ သင့်ကိုတစ်နေ့တာလုံး gluten နဲ့သကြားဓာတ်အားလုံးဖြတ်တောက်ပစ်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှမမျှော်လင့်ပါဘူး၊ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးစားပါ probiotics သင့်ရဲ့နေ့စဉ်အစားအစာထဲမှာ (ကောင်းသောအူဘက်တီးရီးယား) ။
သင့်အနေဖြင့်အကျိုးခံစားခွင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှုနည်းသောလက္ခဏာများနှင့်လက္ခဏာပြမှုနည်းပါးခြင်းများကိုရရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အချိန်ယူရလိမ့်မယ် - ကံမကောင်းအကြောင်းမလှပါဘူး။ ဒီတော့ဒီမှာသင်ကိုယ်တိုင်အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့အပ်နှံရမယ်၊ fibromyalgia ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနာနေချိန်မှာအဲဒါဟာအရမ်းခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ လူအတော်များများကအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ငွေမရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်။
ဒါကြောင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ယူခိုင်းပါ။ eg ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ပတ်လျှင်အကြိမ်များစွာကိတ်မုန့်သို့မဟုတ်သကြားလုံးများကိုစားပါက၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေများအထိသာဖြတ်တောက်ပါ။ ပန်းတိုင်များကိုသတ်မှတ်ပြီးယူပါ။ အဘယ်ကြောင့်သို့ရတဲ့အားဖြင့်စတင်မ fibromyalgia အစားအသောက်များတွင်?
စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေ့လျားခြင်းနှင့်စွမ်းရည်နှစ်မျိုးစလုံးကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Youtube ရုပ်သံလိုင်း fibromyalgia နှင့်ဒူလာနှင့်အတူသူတို့အဘို့။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအခမဲ့ရယူခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ BIG စျေးနှုန်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးအနာဂတ်တွင်ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များစွာရှိလိမ့်မည်ဟုသင်သတိပေးသည်။
လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုသုတေသီများကပြသခဲ့သည်။3). သင် fibromyalgia ကြောင့်ရသည့်အခါပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သိထားသည် မီးတောက်-ups နှင့်ဆိုးရွားရက်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်မှတဆင့်ရှိသည် chiropractor အလက်ဇန်းဒါး Andorff, ဒူလာနှင့်အထက်နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ကြောင်းအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးခဲ့တယ်။ ဤတွင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နိုင်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းငါးခုနှင့်လူများစွာသည်ခိုင်မာသောအဆစ်များနှင့်နာကျင်ကိုက်ခဲသောကြွက်သားများသက်သာရာရစေသောအတွေ့အကြုံများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျုချန်နယ်ကိုအခမဲ့ရယူရန်အခမဲ့ဖြစ်သည် လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များနှင့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများအတွက် (ဒီမှာနှိပ်ပါ) သင်ဖြစ်ရမည်မိသားစုမှကြိုဆိုပါ၏
Fibromyalgia နှင့်ရောင်ရမ်း Diet
fibromyalgia နှင့်အခြားအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းတို့တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းကမည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်။ သင်ဘာစားရမည်၊ မစားသင့်သည်ကိုအနည်းငယ်သိရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ အောက်ဖော်ပြပါဆောင်းပါး၌ fibromyalgia အစားအစာအကြောင်းသင်ဖတ်ရှုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: Fibromyalgia အစားအစာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိထားသင့်သမျှ [Great Diet Guide]
Fibromyalgia သည်ကွဲပြားခြားနားသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်နာကျင်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပြည့်စုံသောကုသမှုလိုအပ်လိမ့်မည်။ fibro နှင့်အတူသူများသည်ပိုမိုပြင်းထန်သောနာကျင်မှုဝေဒနာရှင်များကိုအသုံးပြုကြသည်မှာအံ့ not စရာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်မထိခိုက်သောသူများထက်ဇီဝကမ္မကုထုံးသို့မဟုတ် chiropractor နှင့်ပိုမိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
လူနာအတော်များများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ဟုထင်မြင်သည့်မိမိကိုယ်ကိုတိုင်းတာရန်နှင့်မိမိကိုယ်ကိုကုသရန်အသုံးပြုသည်။ ဥပမာ- compression ကို support လုပ်ပြီး ခလုတ်အမှတ်ဘောလုံးဒါပေမယ့် တခြားရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ နှစ်သက်စရာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သင့်ဒေသတွင်း ပံ့ပိုးကူညီမှုအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ရန်လည်း အကြံပြုလိုပါသည် - အောက်တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း ဒစ်ဂျစ်တယ်အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်။
Afibromyalgia အတွက် မိမိကိုယ်ကို ကူညီရန် အကြံပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူနာအများအပြားသည် ကြွက်သားများနှင့် အဆစ်များနာကျင်ခြင်းကို လျော့ပါးစေရန် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် မည်ကဲ့သို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား မေးခွန်းများမေးကြသည်။ fibromyalgia နှင့် နာတာရှည် အကိုက်အခဲ လက္ခဏာများ တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ပြေလျော့မှုကို ပေးသည့် အစီအမံများကို အထူးစိတ်ဝင်စားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဝမ်းမြောက်စွာ အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ရေပူရေကူးကန်အတွက်လေ့ကျင့်ရေး, ယောဂနှင့် တရားထိုင်ခြင်း။အပြင် နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်း။ acupressure ဖျာ (မီးပွိုင့်ဖျာ)
သိကောင်းစရာများ: acupressure ဖျာ (လင့်ခ်သည် ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုတွင် ဖွင့်သည်)
၎င်းသည် နာတာရှည် ကြွက်သားများ တင်းမာမှု ခံစားနေရသော သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးသော တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်ထားသော ဤ acupressure mat သည် လည်ပင်းကြွက်သားများတင်းကျပ်လာစေရန် လွယ်ကူစေသည့် သီးခြားခေါင်းအုံးတစ်ခုပါရှိသည်။ ပုံ သို့မဟုတ် လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ ဒီမှာ ၎င်းအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်၊ စျေးဝယ်အခွင့်အလမ်းများကိုကြည့်ရှုရန်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိနစ် 20 နှင့် 40 ကြားနေ့စဉ်အစည်းအဝေးကိုအကြံပြုထားသည်။
အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် နာတာရှည်နာကျင်ခြင်းအတွက် အခြားကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းများ
compression ဆူညံသံ ကြွက်သားများကိုသွေးလည်ပတ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ချုံ့ခြေအိတ်ကဲ့သို့သော (သို့မဟုတ်) အထူးအဆင်ပြေအောင်ချုံ့လက်အိတ် og ခြေအိတ် လက်နှင့်ခြေတို့တွင်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းလက္ခဏာများကိုဆန့်ကျင်)
ခြေချောင်း pullers (အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းများသည်ကွေးသောခြေချောင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ - တူရိယာခြေချောင်းများသို့မဟုတ် hallux valgus (ကြီးမားသောခြေချောင်းကွေး) - ခြေချောင်းဆွဲသူများကယင်းတို့ကိုသက်သာစေနိုင်သည်)
Arnica မုန့် သို့မဟုတ် အပူအေးစက် (နာကျင်မှုကို သက်သာစေနိုင်သည်)
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အုပ်စုနှင့်ဆက်သွယ်ပါ «အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှု - နော်ဝေ - သုတေသနနှင့်သတင်း» (ဒီမှာနှိပ်ပါ) အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်ရောဂါများနှင့်ပတ်သက်သည့်သုတေသနနှင့်မီဒီယာဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရေးသားချက်များ။ ဤနေရာတွင်အသင်း ၀ င်များသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အကြံဥာဏ်များဖလှယ်ခြင်းဖြင့်တစ်နေ့တာအချိန်မရွေးအကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့များရနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးအားလူမှုရေးမီဒီယာများ (သို့) သင်၏ဘလော့ဂ်မှတဆင့်မျှဝေရန်သင့်အားတောင်းဆိုပါသည်(ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါး (သို့) vondt.net ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လိုပါက) သက်ဆိုင်ရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုပြုသည် (အကယ်၍ သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်နှင့်ချိတ်ဆက်လိုပါကဖေ့စ်ဘုတ်မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ) နားလည်ခြင်း၊ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပထမဆုံးအဆင့်များဖြစ်သည်။
အရင်းအမြစ်- ထုတ်ဝေသည် (စာသားတွင် ကိုယ်ပိုင်အရင်းအမြစ်များကို ကြည့်ပါ)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgi-og-gluten.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2020-02-18 17:36:512022-03-22 15:12:20Fibromyalgia နှင့် Gluten: Gluten ပါ ၀ င်သည့်အစားအစာသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုမိုရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါသလား။
အဆိုပါဆွေးနွေးမှု join လိုပါသလား?
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာကို ထုတ်ပြန်မည်မဟုတ်ပါ။ မဖြစ်မနေ အကွက်များဖြင့် မှတ်သားထားသည်။ *
နောက်တစ်ကြိမ် မှတ်ချက်ပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်၏အမည်၊ အီးမေးလ်နှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို ဤဘရောက်ဆာတွင် သိမ်းဆည်းပါ။
- Ankylosing Spondylitis နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း ၉ Fibromyalgia နှင့်အတူအိပ်စက်ခြင်းပိုကောင်းရန်အချက်များ